လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။ | Mycanvas
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
အကယ်၍ သင့်တွင် အချိန်ပိုင်းအလုပ်မရှိသေးပါက အလုပ်အတွေ့အကြုံသည် အလုပ်ခွင်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် သွားရောက်ပြီး အလုပ်ရှင်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် အလုပ်လောကအကြောင်း လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ယူရန် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ သင်တယောက်တည်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူလုပ်ရတာကို နှစ်သက်နိုင်ပေမယ့် သင့်အနာဂတ်ကို သင်တွေးတောတဲ့အခါ သင်နဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေမှာ မတူညီတဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အားသာချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေ၊ ဝါသနာတွေနဲ့ မိသားစုနောက်ခံတွေရှိတယ်ဆိုတာ သတိရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး၊ အောင်မြင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကို သင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်သည်။
ဒါဆို သင်နဲ့ လိုက်ဖက်တာကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။ သင့်သူငယ်ချင်းအချို့က သူတို့လုပ်ချင်တာကို သိကောင်းသိနိုင်ပေမယ့် သင်မသိဘူးဆိုရင်တောင် အဆင်ပြေပါတယ် – သင်မလုပ်ချင်တဲ့အရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို ခြေလှမ်းတစ်ခုပါပဲ။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဖြစ်လာမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သင့်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို အခြားမည်သူမှ မရွေးချယ်နိုင်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
သင့်ကိုယ်သင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို စဉ်းစားဖူးပါသလား။
● အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ရွေးချယ်မှု များပြားလွန်းသည် – ငါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။
● ကျောင်းပြီးရင် တခြားလူတွေက သူတို့လုပ်ချင်တာကို ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲ။
● ငါ အခု ဘာလုပ်ချင်လဲ မသိရင် ငါ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြီးအောင်လုပ်မလဲ။
● ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခရီးကို ဘယ်သူက ကူညီပေးမှာလဲ။
● တခြားလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြလဲ။
● အလုပ်က တကယ်ပျော်ဖို့ ကောင်းသလား။
ဒါတွေဟာ ကျောင်းထွက်တဲ့အခါ သင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို တွေးတဲ့အခါ သင့်စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ မေးခွန်းအချို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကို အတိအကျသိပါက သို့မဟုတ် သင်လုံးဝမသိပါက ကျောင်းသားတိုင်းသည် ကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အလားတူမေးခွန်းများ မေးကြလိမ့်မည်။
သင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို အလုပ်ရှင်က သင်လုပ်ဆောင်ရန် အချို့သောအလုပ်များကို စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း မဟုတ်သော်လည်း အလုပ်အား သင်မကြိုက်နိုင်သော်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသိပေးလုပ်ငန်းခွင်၊ သင်တန်းနှင့် လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များ
● အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလုပ်ရှင်များက ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများ မျှော်လင့်ထားသည်များကို နားလည်ခြင်း။
● ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ရွေးချယ်မှုများကို ရှာဖွေရန် အခွင့်အရေးတစ်ခု
● မိမိကိုယ်မိမိ နားလည်မှု၊ ရင့်ကျက်မှု၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးလာစေသည်။
● ဆက်လက်လေ့လာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် နောက်ထပ်လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်မှုတိုးစေပါသည်။
● လုပ်ငန်းခွင် ခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် မိတ်ဆက်
● အချိန်ပိုင်းနှင့် ကျပန်းအလုပ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ
● အနာဂတ်အလုပ်နှင့် သင်တန်းလျှောက်လွှာများတွင် အလုပ်ရှင်၏အလုပ်အတွေ့အကြုံကို အကဲဖြတ်ရန် အခွင့်အလမ်းအလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော အရည်အချင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန် အခွင့်အလမ်းများ
● လုပ်ငန်းခွင်ကို ‘စမ်းကြည့်ရန်’ အခွင့်အရေး။
သင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို အလုပ်ရှင်က သင့်အား မျှော်လင့်လိမ့်မည်-
● အချိန်မှန်ပါ – မဟုတ်ရင် သင် ဘတ်စ်ကားကို လွတ်သွားနိုင်ပါတယ် သို့မဟုတ် သင်မပါဘဲ သူတို့စတင်နိုင်သည် (ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းကို သရုပ်ပြခြင်း)
● နားထောင်ပြီး အာရုံစိုက်ပါ (ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်ကို သရုပ်ပြခြင်း)
● အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် (အစပြုမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုကို သရုပ်ပြခြင်း)၊ အထူးသဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပါ။
အလုပ်အတွေ့အကြုံနေရာချထားမှုသည် သင်လိုချင်သည့်အရာမဟုတ်သော်လည်း ရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသော သို့မဟုတ် သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာမဟုတ်ပါက၊ အတွေ့အကြုံမှ သင် သင်ယူနိုင်သည့်အရာများရှိနေသေးသည်-
● မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကို သင်နှစ်သက်ခဲ့သနည်း။
● ဘယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့လဲ။ ဘယ်အရာက လွယ်တာတွေ့ခဲ့လဲ။
● ဘယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မကြိုက်ဖူးလဲ။ဘာကြောင့်လဲ?
● ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်မယ့်သူနဲ့ တွေ့ဖူးလား။
● မင်းမှာရှိနေတဲ့ အားသာချက်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြီးပြီလား။ အဲဒါတွေကဘာလဲ?
● အလုပ်ရှင်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို သင်ဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲ။
● သင်ဘာလေ့ကျင့်မှုလုပ်ဖို့ လိုမလဲ။
● သင်ဟာ လုပ်ငန်းခွင် ဒါမှမဟုတ် သင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အလုပ် ဒါမှမဟုတ် အဲဒီအလုပ်ရှင်အတွက် အလုပ်လုပ်ချင်ပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်?
● အခြားမည်သည့်အလုပ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းကို သင်စုံစမ်းလိုပါသနည်း။
သင် ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာကာ အတွေ့အကြုံများ ထပ်မံရရှိလာပါသည်။ သင်၏ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အကျိုးစီးပွားများ၊ သင်၏တန်ဖိုးများနှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကိုပင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာကြီးကို ရှုမြင်ပုံက ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ သင်ယခုပြုလုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သင့်လျော်မည်ဟု သင်မမျှော်လင့်နိုင်ပါ။ သင်သည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အခြေအနေအသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လိုလိုလားလားရှိရန် လိုအပ်သည်။